mardi, 04 octobre 2016 07:36
Tolona Fanorenana Ifotony : Hiresaka momba ny raharaham-pirenena
Hanao famelabelaran-kevitra ao amin’ny Espace Dera Ampasanimalo anio talata 4 oktobra 2016 ny birao mpandrindra sy ireo mpikambana ao amin’ny «Tolona Fanorenana Ifotony» (T.F.I) hiresahan’izy ireo momba ny raharaham-pirenena sy ny fanatanterahana ny atrikasa hiatrehana ny fanorenana ifotony.
Antsohihy: Manjeky delestazy
Eto Antsohihy dia tsy voavaha mihitsy ny olan'ny tsy fisian-jiro na dia maro aza ireo fampanantenana isak'izay misy mpitondra mandalo. Nefa ny faritra dia mamokatra drakaka sy makamba, izay mila fampangatsiahina. Misy maharitra adiny 10 any ho any isan'andro ny fahatapahana, indraindray manomboka amin'ny 5 ora hariva, tsy miverina raha tsy misasak'alina, misy amin'ny 4 maraina, atoandro vao miverina. Simba avokoa ny sakafo tehirizina, ny asa tsy mandeha izay mila herin'aratra, ny faktira midangana hatrany.
mardi, 04 octobre 2016 06:39
Ambohimanambola-Betafo : Notafihin’ny dahalo andro atoandro
Tamin’ny 9 ora maraina, omaly alatsinainy dia tonga nanafika tao amin’ny tananan’i Vinanisoa Kaominina Ambohimanambola, Distrika Betafo ireo dahalo. Omby 40 no very, lasa hatramin’ny omby niasa teny an-tsaha. Nanara-dia ny Fokonolona sy ny Zandary. Nifankatratra tao Tsinjoarivo ny dahalo sy mpanaradia. Nisy ny fifandonana, ka lavo ny dahalo iray saingy nentin’ireo namany nitsoaka. Navelan’ireo dahalo, ireo omby 40 fa nanavotra aina izy ireo. Mbola tsy tratra hatreto ireo dahalo.
lundi, 03 octobre 2016 13:01
Sambava : Tsy nisy fidiran’ny mpianatra vanona
Nitokona nihidy aman-trano tao amin'ny efitra malalaky ny Lycée Mixte Sambava ny Mpampianatra androany maraina, andro tokony hanombohan’ny taom-pianarana 2016-2017. Nisy solontena ny ZAP na fari-panentanana ara-pedagôjika rehetra, nanambarana fa tafiditra ao anaty tolona isika mpanabe ka tsy manomboka ny fampianarana ary ny asa birao rehetra momba ny fampianarana. Ho an’ny Maitres FRAM dia mitaky fanovana ny “subvention” ho karama raikitra izy ireo ka ho 200.000Ar isam-bolana izany ho an’ny eny amin'ny EPP, 220.000Ar ho an’ny CEG, ary 250.000Ar ho an’ny Lycée. Takian’izy ireo koa ny handraisana ho mpiasam-panjakana ireo Maitres FRAM rehetra amin’ny taona 2018. Ho an’ny efa mpiasam-panjakana indray dia takian’izy ireo ny fanafoanana ny “contrat” enin-taona. Fampakarana ny « indemnité » isan-karazany ary ny fandraisana an-tanana ny sara-pitsaboana sy vidim-panafody.
lundi, 03 octobre 2016 11:12
Sambava : Mpanao gazetin’ny TVM voaendaka
Mirongatra ny asa ratsy ataon'ny andian-jatovo eto Sambava. Taorian'ny nandravan'izy ireo mpanety malaza iray teto an-toerana dia lasibatra koa ny mpanao gazety avy ao amin’ny TVM. Raha iny hody iny ilay mpanao gazety ny alin’ny sabotsy teo dia nendahin’ireo andian-jatovo ireo ka lasa tamin’izany ny fitaovam-piasana tao anaty kitapo toy ny fandraisam-peo (Dictaphone).
lundi, 03 octobre 2016 11:09
Sambava : Basy saika hanafihana mpamokatra lavanila, tra-tehaky ny Polisy
Lehilahy roa nanao taingin-droa tamin’ny moto, avy any Adapa, no nitondra ireto basy poleta vita gasy mandeha amin’ny bala “calibre 12” ireto. Ny fihetsik’izy ireo toa kaodikaody nandritra ny fisavana taratasin'ny moto, teo amin’ny sakana Antohomaro no nisarika ny Polisy hanitatra ny fisavana ny entan’izy ireo, ka nahitana ireo basy ireo, ny alakamisy 29 septambra 2016 teo. Novidian'izy ireo tany Marovato Andapa ireo basy ka enina hetsy Ariary ny iray, ary saika hanafihana tantsaha mpamboly lavanila any amin’ny Kaominina Marojala. Nifanilika samy nilaza tsy tompony izy roa lahy tamin’ny voalohany. Vita androany ny famotorana azy roalahy ka hatolotra ny Fampanoavana ao Antalaha.
dimanche, 02 octobre 2016 13:27
Mahajangabe : Bajaj nodomin’ny fiara Peugeot 306, iray naratra mafy
Teo anoloan’ny banky BMOI no niseho ny loza ny maraina teo, vokatry ny tsy fifandeferana. Ilay Bajaj no tokony hizotra mialoha, tsy nijanona alefa ilay Peugeot 306 fa nitrongy. Naratra mafy ny mpamilin’ilay Bajaj, ary tsaboina ao amin’ny hopitalibe Androva amin’izao.
dimanche, 02 octobre 2016 12:53
Hotanterahina anio alahady 02 oktobra 2016 ny fanitrihana ny nofomangatsiaka eny amin’ny fasandrazany eny Ankadivoribe Antananarivo Atsimondrano. Mialoha an’izay dia hatao veloma farany ao amin’ny Akademia Malagasy izy. Filoha am-perinasa ny Akademia Malagasy izy no nindaosin’ny fahafatesana ny zoma 30 septambra 2016.
samedi, 01 octobre 2016 11:51
Toamasina : Lasa ny manampahefana, miverina ny fanafihana mitam-basy
Lasibatry ny fanafihana mitam-basy ny tranombarotra Su Lone eo Bazary Be, ny alakamisy tamin’ny 11ora atoandro, 24 ora taorian’ny nialan’ny mpitondra fanjakana nanao filankevitry ny governemanta sy filankevitry ny minisitra teto Toamasina. Efa-dahy ireo mpanafika, nandeha moto scooter roa. Ny telo niditra ny tranombarotra, sady nanambana basy no naka ny vola tao anaty baoritra tao am-pivarotana sy ny an’ny mpividy sendra azy ireo tao anaty trano. Tsy fantatra ny sandan’ny vola very, tsy nisy ny naratra na maty fa ny tahotra sy ny fitaintainana no betsaka.
samedi, 01 octobre 2016 11:48
Marovoay : Hampiantrano ny fankalazana nasionaly ny Andro iraisam-pirenena ho an’ny Zokiolona
Hatao aty Marovoay, Faritra Boeny, ny sabotsy 1 oktobra 2016 ny fankalazana nasionaly ny Andro iraisam-pirenena ho an’ny Zokiolona. Hisy fitsaboana maimaimpoana ireo zokiolona mba hananan’izy ireo fahasalamana. Homena ivon-toerana hahafahany mialavoly ireo zokiolona aty Marovoay. Hisy koa fizarana fanampiana ho an’ireo zokiolona ho fanamarihana io andro io.
Page 278 sur 368